Xisbiga Wadani oo qarxiyay halis soo wajahday diyaarad Imaaraadku leeyahay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Xisbiga Wadani oo qarxiyay halis soo wajahday diyaarad Imaaraadku leeyahay
Xisbiga Wadani ee Somaliland ayaa qarxiyay in diyaarad Imaaraadku leeyihiin oo Ka shaqaysa Hargeysa iyo Dubay laguna magacaabo Flydubai ay khatar Ku geli gaartey madaarka magaalada Hargeysa. ” Waa nasiib daro in dadka laga qariyo halista Ka dhalan gaartey diyaaradaas oo markii dambe fadhiisatay Jabuuti ayuu yiri afhayeen u hadley Wadani.
Waxa arintan loo sababeeyay fashil aqoondaro oo ka timid hagista diyaaradaha madaarka Hargeysa kadib markii la eryay dadkii aqoonta lahaa si musuqana lagu geeyay dad aan xirfadeeda lahayn ama ku hadli karin Ingiriis fiican.
Diyaarada ayaa la sheegay inay sidey in ku dhow boqol qof waxana duulis lambarkeedu ahaa 161. Waxaa la hayaa codkii ay duubtey diyaaradaasi iyo weliba dacwadii ay gudbisay ayuu yiri afhayeenka xisbiga oo xaqiijinaya sida xogta uu Ku helay.
Waa arin halisteeda leh markii hawshii ummada loo hayay ee muhiimka ahayd sida tan oo kale si jufaysan faraha loogu geliyo dad aan u qalmin ayuu yiri Xuseen Warsame oo Hargeysa jooga.